आजदेखि स्तनपान सप्ताह शुरु - Kendrabindu Nepal Online News
१६ श्रावण २०७६, बिहीबार ०६:२०
नेपालमा ‘प्रमोसन अफ दी ब्रेस्ट फिडिङ’ नाराका साथ साउन १६ (आज) देखि विभिन्न कार्यक्रम गरी स्तनपान सप्ताह मनाइने तयारी भएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र युनिसेफको अगुवाइमा अगस्ट १ देखि ७ सम्म विश्वभर स्तनपान सप्ताह मनाउने गरिएको छ । नेपाल लगायत विश्वका १७० भन्दा बढी देशले एक हप्तासम्म विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै यो दिवस मनाउने गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा सन् १९९० देखि हरेक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह मनाउन सुरु गरिएको हो ।
शिशुलाई जन्मेको दुई वर्षसम्म आमाको दूध खुवाउन सल्लाह दिने डा. लक्ष्मी लामिछाने (नाम परिवर्तन) ले आफ्नो शिशुलाई भने जन्मेको दुई महिनासम्म मात्र स्तनपान गराउनुभयो । पढाइ सकेर भर्खर मात्र काम थाल्नु भएकी लामिछाने आफू चिकित्सक भएका कारण शिशुलाई स्तनपान गराउन समस्या भएको बताउनुहुन्छ । अस्पतालमा कहिले राति त कहिले ४८ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने भएकाले सुरुको दुई महिना मात्र स्तनपान गराएको र पछि नखुवाउने निधो गरेको उहाँले बताउनुुभयो ।
चिकित्सक लामिछाने भन्नुहुन्छ, “सबैलाई कम्तीमा पनि दुई वर्षसम्म स्तनपान गराउनुपर्छ भनेर सल्लाह दिएँ तर आफैंले खुवाउन नपाउँदा धेरै पीडा भयो ।” शिशुलाई स्तनपान गर्न नदिएपछि दूध गानिएर स्तनको शल्यक्रियासमेत गर्नु परेको नमीठो अनुभव उहाँको छ ।महिलाले बाध्यताले स्तनपान गराउन नपाएका यस्ता उदाहरण धेरै छन् । स्तनपानमैत्री कार्यालय नहुनु, फेसनमा बोतलबाट दूधपान गराउनु तथा उचित परामर्शको अभावमा आमाहरूले स्तनपान कम गराउने गरेको उहाँको अनुभव छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. आरपी विच्छाले विगत १० वर्षको तुलनामा हाल स्तनपान गराउनको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन घटिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्तनपानबारे दुईवटा कुरा थाहा पाउनैपर्छ । पहिलो, जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान गराइ सक्नुपर्छ भने दोस्रो, छ महिनासम्म दूध मात्र खुवाउनु पर्छ । तर दुर्भाग्यवश यो दुवै घट्दो अवस्थामा छ । गोरखापत्रबाट
आजदेखि, सप्ताह शुरु, स्तनपान
Prevईंटा भट्टाको पोखरीमा डुबेर दाजु बहिनीको मृत्यु
हिमाल आरोहणबाट गतवर्ष ५५ करोड राजस्व प्राप्तNext